Manchester City oo Chelsea ka xoogtey koobkii Community Shield +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Manchester City oo Chelsea ka xoogtey koobkii Community Shield +SAWIRRO
Kooxda Kubada Cagta Manchester City ayaa ku Guuleysatay koobka Community Shield kadib markii ay 2-0 ay kaga badiyeen kooxda Chelsea waxaana Cayaartaas ay ahayd mid ay aad uga gacan Sareeyeen dhigooda City.
Goolasha Manchester City waxaa wada dhaliyey Weeraryahanka dalka Argentina ee Sergio Aguero kaas oo Goolashiisu ahaayeen kuwo kala dhashay labada qaybood ee Cayaarta iyaga oo u qalmay in ay dhaliyaan Goolal inta kabadan.
Kadib laba gool oo uu saxiixay Sergio Aguero ayaa keentay in Maurizio Sarri uu lakulmo guul darradiisii ugu horraysay ee soo gaarta isaga oo laylinaya kooxdiisa cusub kulan rasmi ah, macallinkan reer talyaani ayaana ka hadalay ciyaartii guul darradu soo gaartay kooxdiisa.
“Waxa aan u malaynayaa in qaybtii hore aysan aad u xumayn. Qaybtii labaad waxaa jiray farqi aad u wayn oo dhanka jirka ah. Ciyaaraheeni is diyaarinta waxa ay ahaayenkuwa yara waali ah. Waa in aanu shaqeenna.
Mar uu ka hadlayay xeeladdi ay kooxdiisu lasoo gashay garoona Sarri ayaa u sheegay saxafiyyiinta:
“Mararka qaar waxa aannu xoogga saaraynay dhanka midig, mararka qaarna ma anana saarayn. Ciyaarta maanan xakamaynin maanta.” ayuu hadlkisa kuso xiray macallinka reer talyaani.